पहिलोपटक नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी त्रिभुवन विमानस्थलकाे मर्मत हुँदै - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
पहिलोपटक नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी त्रिभुवन विमानस्थलकाे मर्मत हुँदै
१० घण्टा विमानस्थल बन्द, एयर ट्राफिक बढ्ने
समुन्द्रा घिमिरे काठमाडौं चैत १७
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतका लागि नेपालमै पहिलोपटक नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिने भएको छ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिपश्चात् पूर्ण रुपमा पहिलोपटक मर्मत गरिन लागिएको धावनमार्गमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिन लागेको हो।
यसरी गर्छ नयाँ प्रविधिले काम
दैनिक १ सय २० मिटरसम्म कालोपत्रे गर्न सक्ने क्षमताको मेसिनबाट काम सुरु हुनलागेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनीले नै उक्त मेसिन ल्याएको हो।
दुईवटा मेसिनबाट दैनिक काम गर्ने भनिए पनि अहिलेलाई एउटा मेसिनबाटै काम सुरु हुनेछ। काम सुरु भएको तीन हप्तामा अर्काे मेसिन ल्याइनेछ। विमानस्थल कार्यालयले दैनिक ८० मिटर रन–वे मर्मतको काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको पिच उक्काई (पिच जोत्ने मेसिनबाट उक्काइन्छ) सफा गरेर पुनः नयाँ पिच गरिने छ। धावनमार्ग मर्मतको काम सुरु भएको करिब ९० दिन (३ महिना)मा सकिने अनुमान गरिएको छ। सोमबार राति १० बजेबाट विमानस्थल मर्मतको काम सुरु हुनेछ।
कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामानहरु तयारी अवस्थामा राखिने जानकारी दिँदै विमानस्थल कार्यालयका एक अधिकारीले ‘मौसमको अवस्थाअनुसार मर्मतको काम हुने’ जानकारी दिए। उनले भने, ‘जति निर्माण सामग्री तयारी अवस्थामा छन्, त्यति नै निर्माण हुन्छ ।’
धावनमार्ग मर्मतसँगै विमानस्थलभित्र रहेको ट्याक्सी वे समेत मर्मत गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाइ क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्तार परियोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले बताए। उनका अनुसार दैनिक ८० मिटरका दरले मिलिङ मेसिनबाट कालोपत्रेको काम सुरु हुन्छ। पहिलो चरणमा तीन हजार मिटर धावनमार्ग कालोपत्रे गरिने उनले बताए।
आयोजनाका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार राति १० बजेबाट पिच उक्काउने, सफा गर्ने, ट्याग कोड गर्ने लगायतका काम गरी कालोपत्रे सुरु हुने छ। उनका अनुसार कालोपत्रे भएको करिब २ घण्टामा उडान गर्न मिल्छ।
१० घण्टा विमानस्थल बन्द
२००६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलको पूरा धावनमार्ग पहिलोपटक सोमबारबाट जीर्णाेद्धारको काम हुन लागेको हो। मर्मत हुने भएपछि बेलुका १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द रहने कार्यालयले जनाएको छ।
दक्षिणतर्फको भाग कमजोर
‘विमानस्थलको दक्षिणतर्फको भाग कमजोर भएको अनुमान गरिएको छ। कमजोर भागबाट मर्मत सुरु गरिन्छ’, उनले भने, ‘सुरुवाती चरणमा ३० सेन्टिमिटर गहिराइसम्मको कालोपत्रे हटाएर नयाँ कालोपत्रे हाल्ने तयारी छ।’
चार अर्ब २७ करोड लाग्ने
विमानस्थल विकास शुल्कबापत यात्रुबाट लिँदै आएको एक हजार रुपैयाँ संकलन गरी ४ अर्ब २७ करोड लागतमा धावनमार्ग जीर्णाेद्धार गर्न लागिएको हो। धावनमार्ग जीर्णाेद्धारको जिम्मा चीनको सरकारी कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङलाई दिइएको छ।
विमानस्थलमा अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ गरी दैनिक चार सयभन्दा बढी उडान हुँदै आएको छ। आन्तरिकतर्फ २० हेलिकप्टर कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। त्यस्तै तीन नेपाली कम्पनीसहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३१ विमान कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्।
गौचरण विमानस्थलको नामबाट वि.सं. २००६ सालदेखि नागरिक उड्डयन सेवा सुरु गरेको थियो । वि.सं. २०१२ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्ना पिता त्रिभुवनको नामबाट विमानस्थलको नाम राख्न लगाएको बताइन्छ । विमानस्थलको धावनमार्ग ३ हजार ५० मिटर लम्बाइ र ४६ मिटर चौडाइमा फैलिएको छ। विमानस्थलमा ट्विनअटर, एटीआरदेखि एयरबस ३३० सम्म उडान र अवतरण हुने गर्दछ। साथै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९ र अन्तरिकतर्फ १७ वटा पार्किङ वे रहेको छ।
दुई पार्किङ वे खाली नहुँदा समस्या
अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ९ पार्किङ वे रहेकामा नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सका विमानले नै दुई पार्किङ वे खाली नभएको बताइएको छ। दुई पार्किङ वे खाली नहुँदा विमान पार्किङमा समस्या परेको छ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ नयाँ बन्दै गरेको पार्किङ वे निर्माण सम्पन्न भएपछि भने समस्या हुने छैन।
एयर ट्राफिक बढ्ने
विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतका लागि १० घण्टा विमानस्थल बन्द हुने भएपछि त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयको एयर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको छ । बिहान ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्रै एयरपोर्टमा आउने सबै फ्लाइटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
बिहान खासै बिजी नहुने एयर ट्राफिक कन्टोलमा दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म र बेलुका ५ बजेपछि समस्या हुन्छ। पिक आवरको रुपमा रहेको बेलुकाको समयमा उडान व्यवस्थापनमा सहजता अपनाइने छ। उनका अनुसार धावनमार्ग मर्मतका लागि भन्दै उडान कतौती गरिएको छैन।
प्रकाशित १७ चैत २०७५, आइतबार | 2019-03-31 18:07:37